Radio Sudoorawaz 95 Mhz मेरो सहर
आईतबार पुस ८, २०७५
डडेल्धुरा सुदूरपश्चिमको मुख्य प्रवेस द्धारका रुपमा रहेको मध्य पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा सदरमुकाम बागबजार लगायत तुफानडाँडा, खलंगा, किर्तीपुर क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास संगै बजार क्षेत्र बिस्तार हुदै गए पछि कयौ खाले समस्या उत्पन्न भएका छन । अमरगढी दलाई स्मार्ट सिटी बनाईने भनिए पनि अहिले सम्म कधुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सहरीकरण तर्फ उन्मुख हुदै गए पनि डडेल्धुरा तोकिएको मापदण्ड अनुसार विकास हुन सकेको छैन । सहरका बिषयमा हामिले डडेल्धुरा उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष खेमराज पनेरु संग कुराकानी गरेका छौ ।
तपाईको बुझाइमा सहर के हो ?
मेरो बुझाईमा सभ्य बसोवास देखि बजार भएको । सबै सेवा सुबिधा सजिलै उपलब्ध हुने स्थान सहर हो ।
तपाईले भन्नु भएको सहरमा कस्ता सुविधा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
मलाई लाग्छ सहरमा व्यवस्थित आवश्यकता अनुसार चौडाई भएका सडक, ढल निकास, घर तथा बजार क्षेत्रमा पर्याप्त चर्पिको व्यवस्था, गाडी पार्किंग, बिजुली बत्ति, खानेपानि, शिक्षा, स्वास्थ्यको सहजै उपलब्धता लगायतका सुबिधा हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ ।
तपाईले भन्न खोज्नु भएको कस्तो सहर हो ?
त्यो व्यवस्थित सहर हो । मानिस लाई आवश्यक सबै कुरा उपलब्ध हुने बाटो घाटोको सुबिधा व्यवस्थित बसोवास संगै व्यवस्थित बजार भएको सहर हो ।
सहरको विकासमा हामी कहाँनिर चुक्यौं जस्तो लाग्छ ?
खास गरी के भयो भने बाटो सडकको मापदण्ड नै भएन मापदण्ड विपरित सडक बाटो बन्यो, ढल निकास गरिएको छैन, हामि सहरको सिमारेखा भित्र नै परेनौ । सुरुवात देखि नै भौतिक पुर्वाधारका कुराहरुमा हामि चुक्यौ । जतिवेला सडक कालो पत्रे हुदै थियो, बजार बिस्तार हुदै थियो, त्यस बखत जननिर्वाचित राजनैतिक दलका नेता, व्यवसायी र स्थानिय वासीले सहरको कल्पना नै नगरी अव्यवस्थित ढंगले बसेकाले चुकियो ।
विकासका काममा होस पु¥याएको भए कस्तो बन्थ्यो होला हाम्रो सहर ?
त्येसो भएको भए एक दमै सुन्दर सहर डडेल्धुरा बन्थ्यो । भौगोलिक बनावट संगै वातावरण पनि राम्रो रमणिय स्थल भएकाले योजना बद्ध रुपमा सडक, बजार, वस्तिहरु बसाईएको भए सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लाहरुको केन्द्रमा रहेको डडेल्धुरा सुन्दर सहर संगै व्यवसायिक, शिक्षा, स्वास्थ्य खेलकुदका हिसावले हव बन्न सक्थ्यो ।
तपाई सानो छँदा डडेल्धुरा सहर कस्तो थियो ?
सानै थियो डडेल्धुरा बजार पनि । चारै तिर घना जंगल, कच्चि सडक बाटो, तत्कालिन बाघखोरमा एक दर्जन पसल पनि थिएन्न । खलंगा क्षेत्रमा केही पुराना परम्परागत पेगोडा शैलीका घर र अन्य आप्राहरु थिए । थोरै कहि कतै मात्रै घर, घरमै व्यापार व्यसाय गरिरहेका केही स्थानिय, जेनेरेटर बाट बिजुली वितरण गरिएको थियो ।
हाम्रो सहरमा के हुनुपर्ने थियो र के भइरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
धेरै कुरा हुनु पर्ने खासै केही पनि भएको छैन । एक दर्जन पसल र ४०÷५० घरधुरी संख्या बाट दुई हजार बढी घर बनिसकेका छन । पञ्चायत कालमै बनेको खानेपानि योजनाले अहिले पनि खपत भईरहेको छ । सडक कालोपत्रे भयो चौडा पारिएन आज भोली निकै समस्या उत्पन्न भएको छ । ढल निकास गरिएको छैन । बिजुली बत्ति भने पुगेको छ । उप क्षेत्रिय अस्पताल बने पनि स्वास्थ्य उपचार त्यो बराबरको छैन । शिक्षा क्याम्पस बाट डडेल्धुरा बहुमुखि क्याम्पस स्थापना गरिए पनि बिद्यार्थी नपाउने अवस्था छ । खेल मैदान नै छैन । सुदूरपश्चिमा एयरपोर्ट नभएको जिल्ला सहर डडेल्धुरा मात्रै हो । शिक्षा स्वास्थ्यमा खासै केही विकास हुन सकेन अव्यवस्थित बसोवास मात्रै बढेको र फोहरले भरिएको छ । बाँकी केही बन्न सकेन । राजनैतिक दलका नेताहरुले ईच्छ शक्ति देखाई दिएको भए डडेल्धुरा स्वर्गको अनुभुती गर्न मिल्ने व्यवस्थित सहर बन्न सक्थ्यो ।
ऐतिहांसिक अमरगढी किल्ला, अजयमेरु कोट, धार्मिक सांस्कृतीक रुपमा उग्रतारा, घटाल थान, परशुराम धाम लगायत परम्परागत रितिविराज तथा प्राकृतिक रुपमा आलिताल लगायतका तवरले पर्यटकको राम्रो सम्भावना थियो यहा त्यो हुन सकेको छैन ।
कुन–कुन देशका सहर घुम्नुभएको छ ?
तेस्रो देशका सहर त मैले घुमेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतका केही सहरहरु मात्रै हो । त्यसमा पनि व्यापारका सिलसिलामा भारतको राजधानी नँया दिल्ली गईएको थियो । त्यो पनि धेरै बर्ष बिति सक्यो । नेपालका भने विभिन्न सहर, काठ्माण्डौ, पोखरा, विराटनगर, नेपालगजं घुमेको छु ।
तपाईँलाई मनपर्ने सहर कुन हो ?
भारतको राजधानि भएकाले अहिले कतिपय क्षेत्रमा व्यवस्थित गरिएकाले नँया दिल्ली मन पर्ने सहर हो ।
नँया दिल्ली सहरको कुन कुरा तपाईलाई मन पर्छ ?
नँया दिल्लीको सडकहरु मन पर्छ । फराकिला बनाईएका छन । मुख्य सडकहरु चौडा पारिएकाले ट्राफिक जामको समस्या हुदैन । कुनै पनि नागरिकले सहज र छिटो यात्रा गर्न सक्दछन ।
तपाईलाई सहरको मनपर्ने खाने कुरा के हो ?
लड्डु मन पर्छ । मलाई गुलियो मन पर्ने भएकाले लड्डु नै मन पर्छ ।
प्रस्तुतिः पुष्कर भण्डारी/ डडेल्धुरा